Safiirkii Ruushka U Fadhiyey Dalka Turkiga Oo La Dilay - Wargane News
Home Somali News Safiirkii Ruushka U Fadhiyey Dalka Turkiga Oo La Dilay
Waxa Dhintay Safiirkii Dawladda Ruushka u fadhiyey Caasimadda Dalka Turkiga ee Ankara Andrey G. Karlov, ka dib markii uu dhaawacay Nin Baastoolad ku hubaysnaa.
Safiirka Ruushka, ayaa u dhintay Dhaawac uu u geystay Nin Baastoolad ku hubaysnaa oo Dhabarka dambe ka toogtay isagoo hadal ka jeedinaya Madxaf ku yaalla Ankara oo lagu soo bandhigay Sawirro ka Tarjumaya Aragtida Ruushka ee Turkiga Maanta.
Booliiska ayaa toogasho ku dilay Ninka Dilay Safiirka Ruushka oo la sheegay in markii uu Weerarka ku qaaday Safiirka inuu ku qaylinayey Kalmadda ALLAAHU AKBAR oo Macnaheedu yahay ‘ILAAHAY baa weyn’ iyo kalmado kale oo ku saabsan Magaalada Aleppo ee Dalka Suuriya oo uu Ruushku ka wado hawl-gallo Milletari oo uu ku taageerayo Ciidammada Xukuumadda Suuriya.
Maria Zakharova oo ah Afhayeen u hadashay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, ayaa Telefiishanka 24 news Channel u sheegtay in Safiirkoodu u dhintay Dhaawac ka soo gaadhay waxay ku sheegtay Weerar Argagixiso sida uu baahiyey Wargeyska New York Times oo Himilo soo xigatay.
Wakaaladaha Wararka ee Ruushka, ayaa iyaguna baahiyey in Dal-xiisayaasha u dhashay Ruushka ee ku sugan Turkiga looga digay inay ka baxaan Huteellada ay ku jiraan.
Wargeyska New York Times oo soo xiganaya Wakaaladda Wararka ee Dalka Ruushka ayaa sheegay in Weerarka lagu dilay Safiirka Ruushka ee Turkigu ahaa Shirqool.
Dilka Safiirka Ruushka ee Turkiga, ayaa keeni kara in xidhiidhka labada Dal xumaado.
Dilka Safiirka Ruushka